Mu’asasada Safa ee dacwada iyo Hormarinta oo Dowrada u qabtay dhalinyarada ku nool Muqdisho
Muqdisho:-Mu’asasada Safa ee dacwada iyo Hormarinta waxaa ay ka shaqeysaa arrimaha dacwada Diinta islaamka iyo Hormarinta qaybaha kala duwa ee bulshada soomaaaliyeed, iyadoo adeegsanayso hababka wacyi galinta waafaqsan shareecada islaamka. Mu’asasada waxay u qabatay dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha iyo iskuulada dugsiyada sare ee Muqdisho – Somalia 11 – 13 ربيع الأول 1434H oo ku began 24 – 25 Janaayo 2013 M , Dowro labo maalmood socotay cinwaankeeduna yahay الشباب المسلم ودوره في بناء الشعب الصومالي
Waxaa duruusta dowrada ka jeediyey culimo iyo aqoonyahanno kala duwan waxaan ka mid ahaa :
1- Sh.Bashiir Axmed Salaad oo ka hadlay مشكلات الشباب وعلاجها
2- Sh.Maxamuud Sh.Axmed – Abuu sheyba oo soo jeediyey الإتصاف بعلوّ الهمة
3- Macalin Qaasim Xassan diini دور الشباب في الدعوة إلى الله
4- Sh.Cali Aadan Isxaaq oo ka hadlay أهمية العلم للشباب
Waxaa ka soo qayb galay dowrada arday tiradooda gaarayso ilaa 50 arday , kuwaasoo ahaa arday xul ah oo ka kala socday jaamacadaha iyo iskuulada sarre ee magaalada Muqdisho.
1- Kor u qaadista aqoonta iyo fikirka dhalinyarada soomaaliyeed oo noqday mid ku taamaayo waxyaabo aan dan u ahayn sida tahriibka IWM.
2- Ka qaybqaadashada wacyi galinta dhalinyarada iyo kor u qaadista himiladooda ku aadan nolosha iyo waxbarashada.
3- Ka shaqaynta dacwada diinta islaamka si looga hortago waxyaalaha wax u dhibaayo Diinta , Akhlaaqda iyo Dhaqanka suuban ee islaam ka iyadoo la adeegsanaayo hababka Dacwadeed ee kala gadisan oo waafaqsan shareecada islaamka lagana fogaanaayo wax kasta oo wiiqi kara hadafka dacwada.
Mana ahan markii ugu horeesay oo ay dowrooyin noocaan oo kale ah qabato , waxay kuwa lamid ah dowrooyinkaan horay ugu qabatay haweenka soomaaliyeed ee k u nool magaalada Muqdisho. Ugu danbeentii dowradan ayaa noqotay mid ardaydii ka qayb qaadatay aad u soo dhaweeyeen ku dhamaatay jawi wanaagsan.
Mu’asasada Safa ee dacwada iyo Hormarinta